OLCreate: Get started with online learning - Myanmar အွန်လိုင်းမှ ပညာသင်ယူမှုကို စတင်လိုက်ပါ
/ ► Websites
/ ► အွန်လိုင်းမှ ပညာသင်ယူမှုကို စတင်လိုက်ပါ
အွန်လိုင်းမှ ပညာသင်ယူမှုကို စတင်လိုက်ပါ
စားသောက်ကုန်တွေ ဝယ်တာ၊ ငွေကြေးကိစ္စတွေ စီမံခန့်ခွဲတာ၊ လှူမှုအတွေ့အကြုံတွေ မျှဝေတာနဲ့ အဲသလို မဟုတ်ရင်လည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နေထိုင်နေကြတာအတွက် အင်တာနက်က ပိုပိုပြီးတော့ ကြီးမားတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ထဲမှာ လူဘယ်နှစ်ယောက်လောက်က အွန်လိုင်းကနေ လေ့လာသင်ယူဖို့ စဉ်းစားထားကြသလဲ။
"အွန်လိုင်းမှ သင်ယူမှုကို စတင်လိုက်ပါ" ဆိုတဲ့ ဒီအခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းမှာ အွန်လိုင်းကနေ သင်ယူတယ်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာအပြင် ဒီသင်တန်းကနေရနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပါ ရှင်းပြထားပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ လေ့လာသင်ယူဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို မြင်တွေ့လာပြီး ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ လေ့လာမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းအသိုက်အမြုံတွေကို ကျောင်းသားတွေ ဖွဲ့စည်းကြပုံနဲ့ သီးသန့်ဆရာတွေက ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့အပြင် အခြေအနေနဲ့အညီ သင့်တော်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ လေ့လာမှု အစီအစဉ်တွေကနေ အကျိုးကျေးဇူးတွေရနေပုံကို လေ့လာရပါမယ်။
အွန်လိုင်းမှ လေ့လာတာက သမားရိုးကျ သင်ကြားမှုပုံစံတွေကို အတုယူဖို့ ဒါမှမဟုတ် ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ နည်းပညာကို အသုံးချပါတယ်။ ဥရောပသမိုင်းကာလနှစ်ခုကို လေ့လာတာ၊ အွန်လိုင်း OpenScience Laboratory ကနေ ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်ကို ပို့ချတာနဲ့ အခမဲ့ app တွေသုံးပြီး တရုတ်စာ အရေးကျင့်တာတွေ အပါအဝင် အဲဒီ သင်ကြားမှုပုံစံတွေထဲက တချို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ ဒီသင်တန်းက The Open University ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကို ယူသုံးထားပါတယ်။
အဆောက်အဦးတွေ၊ ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေတွေရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်မှာ တက်ရောက်လေ့လာတာက လူတိုင်းအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရမယ့် တာဝန်တွေရှိနေရင်၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်အကိုင်ပြောင်းဖို့ ဒါမှမဟုတ် သက်မွေးပညာ ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် တိုးတက်ဖို့ ပြန်လည်မွန်းမံသင်ယူလိုရင်၊ ဒါမှမဟုတ် လေ့လာရင်း စီးပွားရှာချင်ရင် အွန်လိုင်းကနေ လေ့လာတာက သင့်အတွက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီသင်တန်းအတွက် စာရင်းပေးခြင်းဖြင့် သင်တန်းတစ်လျှောက်မှာ မိမိတိုးတက်မှုကို သိနိုင်တဲ့အပြင် သင်တန်းပြီးတဲ့အထိတက်ရင် သင်တန်း တက်ရောက်ပြီးဆုံးကြောင်းလက်မှတ်ပါ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
This course is part ofacollection of courses called TIDE Gateway Courses for Students. There are 8 courses in this collection so you may find other courses here that maybe of interest to you.
အွန်လိုင်းလေ့လာမှု၏ အဓိကကဏ္ဍများကို နားလည်လာမည်
ကျောင်းတွင်လေ့လာခြင်းနှင့် အွန်လိုင်းလေ့လာခြင်း၏ အဓိကကွာခြားချက်ကို သိရှိမည်
အွန်လိုင်းလေ့လာခြင်းသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွား၊ မိမိစိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ကိုက်ညီနိုင်ကြောင်းနှင့် မည်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိနိုင်ကြောင်း အကဲဖြတ်နိုင်မည်
First Published 05/05/2021.
ပထမသီတင်းပတ် - အွန်လိုင်းမှ သင်ယူသူတစ်ဦးဆိုသည်မှာ
Expandပထမသီတင်းပတ် - အွန်လိုင်းမှ သင်ယူသူတစ်ဦးဆိုသည်မှာ
ပထမသီတင်းပတ် - အွန်လိုင်းမှ သင်ယူသူတစ်ဦးဆိုသည်မှာ Website content
ဒုတိယပတ် - အွန်လိုင်းတွင် လေ့လာသင်ယူခြင်း
Expandဒုတိယပတ် - အွန်လိုင်းတွင် လေ့လာသင်ယူခြင်း
အွန်လိုင်းတွင် လေ့လာသင်ယူခြင်း Website content